Afar Arrimood Oo Go’aamin Doonna Natiijada Ciyaarta England Iyo Croatia | Saxil News Network
Hargeysa, (saxilnews)-Xulka qaranka England ayaa caawa ka hortegi doona Croatia ciyaar ka tirsan semi-finalka Koobka Adduunka oo midkooda guuleysta uu iska xaadirin doono Finalka oo uu la ciyaari doono Faransiiska.
Ciyaartan oo ka dhacaysa magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka, ayaa waxay macallimiinta iyo
ciyaartooyada khubarada ah ee labada kooxood isku adeegsan doonaan maskax, farsamo iyo xoog, si uu mid walba ugu dagaallamo inuu xaqiijiyo himilladiisa ah inuu gaadho faynalka.
Waxa aanu maanta halkan idiinku soo gudbinaynaa afar arrimood oo muhiim ah oo go’aamin doona natiijada ciyaarta, kuwaas oo dalka ku gacan sarreeya ay hubaal tahay inuu si fudud ugu gudbi doono kulanka ugu dambeeya ee faynalka.
Mario Mandzukic vs. John Stones: Waa siday tahay ciyaartu, waana khasab in weeraryahanka wanaagsan lagu
xidho difaac adag oo u diida inuu goolkiisa usoo dhowaado.
Croatia waxa goolka ugu jira goolhaye khabiir ah oo lagu magacaabo Subasic oo saddex rikoodhe ka qabtay Denmark wareeggiii 16-ka, sidoo kalena hawada u diray Ruushka, taasina waxay naxdin ku tahay ciyaartooyada England ee laagan doona rikoodheyaasha haddii laysla gaadho